Ukwakheka usikilidi obhemayo ebhubhisa
On ngezingozi zokubhema ngizwile konke. Kodwa, noma kunjalo, abantu ababhemayo beba more and njalo ngonyaka. Abanaso cabanga ukuthi kwenzeke kanjani elimazayo emzimbeni ngenxa usikilidi kuhlanganisa omningi eziyingozi.
Kuyadabukisa kakhulu ukuthi kulo mkhuba ithumba kanye intsha. Futhi ngokuvamile bengekho ngisho uyazi imiphumela.
Yini usikilidi? Siqukethe hhayi kuphela ugwayi abaningi ngokungazi bakholwe. Yebo, noma kanjani, nguye ejenti main, kodwa akuyena yedwa. Ugwayi kungokwalabo umndeni Solanaceae. It has mayelana 40 zilwane, it is esakazwa yasezindaweni ezishisayo zaseMelika. Kuyaziwa ukuthi endulo ugwayi bajeziswe kanzima futhi ahlukunyezwe. Abanye baze babulawa ngisho nokubulawa. Futhi lokhu kungenxa yokuthi umzimba ngesikhathi ukubhema iwe izinto eziyingozi kakhulu ezifana -carbon monoxide, nitrogen, i-nicotine, acetic acid.
I-nicotine, oyingxenye ugwayi, kungaba yingozi zonke izibilini obhemayo. Phakathi ucwaningo kwatholakala ukuthi ezimbili kuphela amathonsi ubuthi kuyinto-nicotine ngokwanele ukuze bafake ubuthi inja, polkapli ukubulala unogwaja. Ubuthi nge nicotine kanye kungaba umuntu, kulesi simo izimpawu olunje: ikhanda, isifuba ukungakhululeki, ishayela ngokushesha futhi kwenhliziyo, isiyezi, ukuhlanza kanye nesicanucanu.
Ngaphezu kwalokho, ukwakheka resin kuhlanganisa ugwayi, cadmium, i-arsenic, benzopyrene, nickel, acetone ngisho hydrocyanic acid. Kunzima ukukucabanga, kwesokudla? Konke lokhu ubuthi faka umzimba komuntu obhemayo cishe njalo.
Arsenic - a enobuthi kakhulu amakhemikhali isici. Ngaphambili, ngosizo ukubulala amagundane kanye amagundane. Umuntu kalula ubuthi ketshezi.
Cadmium avame ukunqwabelana kwezitho zomzimba womuntu ezifana izinso. Lokhu heavy metal kuyinto umuntu esibone sibonga ugwayi. Cadmium ngesikhathi sokukhulelwa kuyingozi embungwini okhulayo, kungabangela zabasebenzi ngaphambi kwesikhathi.
Nickel - ikhemikhali ebangela umdlavuza kanye somoya.
Hydrocyanic acid liyasetshenziswa namagundane, futhi ngaphandle kuyingozi kakhulu abantu.
Nasi Ukwakheka ocebile. Ugwayi ugwayi, njengoba ungabona, kancane. Ngokwengxenye enkulu baba aqukethe izakhi eziyingozi kakhulu. Empeleni, akukho muntu ongakwazi ukumazi ngempela yini ugwayi, yena ebhema. Amankampani wahlanganyela ekukhiqizeni nasekusakazeni imikhiqizo kagwayi, ungabe usavula izimfihlo zabo. Futhi uqhubeka nabo babengicindezela ukuba ngibheme futhi donsa ubuthi obulalayo, ngokungazi bekholelwa ukuthi osikilidi akuzona eziyingozi ngakho. Ugwayi kuyalimaza, kodwa hhayi ngokwanele ukuba give up lo mkhuba - abantu abaningi ngakho-ke cabanga. Futhi akulungile kakhulu. Lokho nje akusho engeza kubo singene abakhiqizi usikilidi ukunciphisa izindleko kanye ukwandisa inzuzo.
Yeka ukubhema ngempela futhi kungenzeka. Yebo, isidingo babiza ke eziningi umzamo, kodwa umphumela kuwufanele. Kumele baqonde ngokucacile ukuthi impilo akunakuthengwa nganoma yisiphi umzimba imali nogwayi zonakale ngeke enempilo.
Hookah ku ubhamubhamu: indlela yokukwenza uzizwe ungcono?
Iculo le-Cigarettes Electronic: ukubuyekezwa. Ecom C: incazelo, izithombe
Yiziphi cigarillos Backwoods?
Ikhambi ukubhema "Evalar" "Awezemidlalo yokulwa plus": libuyekeza ababhemayo nekghono
Alma - emfuleni eCrimea. Incazelo, izici, izithombe
Umalusi Australian: malusi ka Nkulunkulu
Medicine "Azithromycin": analogs Ungashintshanisa izidakamizwa yasekuqaleni
Isifo ikati: indlela ukudambisa isimo isilwane?
Indlela ukupheka 'Napoleon' siqu
"ERA-GLONASS" - kuyini? uhlelo yezokuphepha "ERA-GLONASS": incazelo, Umgomo we operation kanye nokubuyekeza
Isimiso ezisebenza we Geiger counter bese dosimeters yesimanje
Kuyini kwentsha: sokunquma umkhawulo yobudala
Izithelo jellies - iresiphi, isikhathi-ihlolwe
Izindaba ezishaqisayo: Vinni Puh ngiseyintombazanyana!